Amakhodi Womculo weRoblox - Umhlahlandlela Wokuthola Ama-ID Wengoma (Disemba 2020) - Ungakwenza Kanjani
Amakhodi Womculo weRoblox - Umhlahlandlela Wokuthola Ama-ID Wengoma (Disemba 2020)
Amakhodi womculo weRoblox ayindlela elula yokwengeza umculo kugeyimu yakho ngenkathi ujabulela isihloko esihle. Kumahhala ukudlala, futhi sonke singaba nokuzijabulisa okuncane ngenkathi sijabulela i-gameplay ethokozisayo. Noma imuphi umculo, omdala noma omusha, wendabuko noma we-indie ungasetshenzelwa kuRoblox. Konke okudingekayo ukuthi umsindo kufanele ubhaliswe ku-database yomculo weRoblox.
Abathuthukisi begeyimu kuRoblox basebenzisa umsindo nomculo ukwenza umdlalo wabo uhehe kakhulu. Bakwenza lokho ngokungeza umsindo njengomculo wangemuva. Kulula ukufaka amakhodi omculo ku-Gameplay yakho. Kulo mhlahlandlela, sizokhombisa konke okuphathelene namakhodi womculo weRoblox.
Ama-athikili amaningi ahlobene neRoblox:
Amakhodi Wokwazisa weRoblox - Uhlu Lokusebenza
Ungawathola Kanjani Amakhodi Womculo weRoblox?
Iya ku-akhawunti yakho ye-Roblox bese uthayipha isikhala ebhokisini lokusesha. Uzothola iziphakamiso ezahlukahlukene ngezansi, chofoza u- 'Library' kusiphakamiso. Ngemuva kokungena ekhasini leLabhulali, chofoza inketho yomsindo. Lapho usukhethe inketho ye-Audio, iqondisa kabusha ekhasini lomculo lapho ungathola khona izingoma ezanele ezingezansi. Futhi uma ufuna ukuthola ucezu oluthile phakathi kwendawo engcwele yamafayela omculo, uzothola i-id phezulu ekhasini kusigaba se-URL.
Inombolo enamadijithi ayi-9 (amadijithi ayi-10 kwesinye isikhathi) phakathi kokushaywa kokuya phambili kuyikhodi yomsindo othile. Ungapheqa ikhodi yomculo yezingoma zakho ozithandayo ku-google. Kunamawebhusayithi azinikele ngqo kumakhodi womculo eRoblox. Thola amakhodi wamathrekhi akho owathandayo bese ukopisha inombolo enamadijithi ayi-9 (noma ikhodi yomculo enezinombolo eziyi-10), bese uyinamathisela phakathi kwalezi zinhlamvu ezimbili eziya phambili. Manje kukhona onendlela yakho ethize kungxenyekazi yemidlalo yeRoblox.
Nawa amakhodi weRoblox wezinye izingoma ezidumile,
Izinkumbulo zikaMaroon 5 - 4250558781.
Ingane kaJustin Bieber - 215816785.
Uhlelo lukaNkulunkulu nguDrake - 1479998427.
Kancane - 1341533521.
Yilokho Engikuthandayo nguBruno Mars - 887315453.
IHavana nguCamilla Cabello - 1464709380.
Lousy Guy nguBillie Eilish - 3015811673.
Sizokudumisa NgeNdlovukazi - 140777409.
I-Old Town Road nguLil Nas X - 2931174010.
IPanini - 3340674075
Ukubulala emqondweni wami - 22551926665
Kancane - 1341533521
IPanda - 401059459
Ukuduma - 755156652
Okholwayo - 650763116
IHavana - 1302575647
Ihlobo - 60685337
Ngibheke - 425832596
Ngiyayithanda - 2360932493
Ubumnyama - 2157761406
Othandekayo - 2183613911
Izikhali ezikuzungezile - 2201082543
Ephukile - 43591163
Izibusiso - 455514322
Ukuwa phansi - 2375621580
UJocelyn Flores - 1099730877
Ungabasebenzisa Kanjani Ama-ID Omculo WeRoblox?
Okokuqala, kufanele ube ne-boombox. Qalisa umdlalo wakho weRoblox bese ungena endaweni yesikhulumi.
Ngaphezu kwalokho, chofoza ku-boombox yakho bese uthayipha i-ID noma ikhodi yengoma oyikhethile. Lapho unayo, umculo wakho uzwakala nge-boombox.
Nazi izindlela zombili zokulayisha nokuthola ifayela lokulalelwayo kuRoblox.
Fometha ukulayisha ifayela lomsindo:
Ifayela elilalelwayo lingalayishwa kufayela le-mp3 noma ifayili le-OGG, izinhlobo zamafayela ngaphandle kwalezi ezimbili zingaba nengozi yokuthi ifayili lingasebenzi kahle.
Inqubo yokulayisha ifayela lomsindo:
Sonke sifuna ukujabulela umculo wangokwezifiso, futhi ungenziwa ngokushesha kuwebhusayithi. URoblox unenhlinzeko yokwengeza umculo ofanelana nokunambitheka kwakho. Ungalayisha kalula okuqukethwe ngezindlela ezahlukahlukene. Nazi izinyathelo ongazisebenzisela inqubo yakho yokuhlela umsindo. Ukulayisha kwenziwa ngewebhusayithi kaRoblox, roblox.com.
Ungaqala ngokuya kusiphequluli sakho bese uchofoza kulokhu isixhumanisi . Kuzokusa ekhasini lasekhaya laseRoblox. Lapha ungangena ngemvume ku-akhawunti yakho yeRoblox. Kulula ukuqala ngokusebenza ekubhaliseni kweRoblox.
Uma usungene ngemvume uzobingelelwa yisikrini sokungena esijwayelekile se-akhawunti yeRoblox. Chofoza isithonjana sokudala phezulu ekhasini. Kuzokusa kumtapo wezincwadi zendalo onayo kuwebhusayithi. Lapha kufanele ukhethe inketho yomsindo.
Lapho usukhethe inketho yomsindo, kulula ukwengeza ifayela lakho lomculo ku-akhawunti. Ukulandela lokho, phequlula bese ukhetha ifayela lomsindo. Ukulayisha kuzothatha imizuzwana embalwa kuphela kuye ngejubane lakho le-inthanethi.
Lapho usukhethe ifayela elilalelwayo, chofoza okuthi Linganisa Intengo ukuze ubone ifayela le- Izindleko zeRobux (imali engaphakathi kwegeyimu) ngomsindo owukhethile. Ngemuva kokuqinisekisa kwakho, qedela ukuthenga kwakho. Izindleko zeRobux ngokuvamile ziphansi kakhulu uma ucabanga ngosayizi wefayela lakho lomsindo.
Lapho umsindo usukhethiwe, ungakhokha bese uqala ngokusetshenziswa kwefayela lakho lomsindo. Kulula ukukwenza lokho uma uneRobux ku-akhawunti yakho. Abasebenzisi bangangeza imali yeRobux ngokukhokha endaweni yesikhulumi.Umsindo kufanele ube ngaphansi kwemizuzu eyisikhombisa, okuncane kuno-20 MB, okuzocacelwa ukuqondakala. Umsindo awunakusheshiswa, wehliswe, futhi awunakushintshwa.
Ama-20 angaphakathi komdlalo uRobux imizuzwana engu-0 - 10.
Ama-35 angaphakathi komdlalo uRobux amasekhondi ayi-10-30.
70 kumdlalo Robux imizuzwana engama-30 - imizuzu emibili.
Ama-350 angaphakathi komdlalo uRobux imizuzu emi-2 - 7.
Izindleko zomsindo zinengqondo, futhi ungathenga okunengqondo ngokuya ngezidingo zakho. Kuyisidingo kulabo abafuna ukuba nomculo futhi basebenze kumadivayisi abo.
Abasebenzisi banenkululeko yokumisa umsindo ngokuya ngezidingo zabo. Kuzuzisa kakhulu kulabo abafuna ukuhlela izinhlobo ezimbalwa zomculo. Sincoma lokhu kubasebenzisi abafisa ukuba nesikhathi esihle ngenkathi bedlala umdlalo. Ilungele ukuhlola umculo omusha nokuhlela okhona ngokuya ngezidingo zakho. Nawu umhlahlandlela wokumisa amakhodi akho womculo weRoblox.
Uma usulayishe ifayela lakho lomsindo, ungenza futhi umculo wakho ngendlela oyifisayo ekhasini lokumisa. Iya enkethweni yezilungiselelo ezitholakala kwesokudla sefayela elilayishiwe kuthebhu yomsindo wohlelo lwakho lokwakha.
Ikhasi lokumisa linezinketho zegama, incazelo, vula / vala imibono, uhlobo, futhi wenze mahhala.
Igama -le nketho yokwenza ukuhlela egameni lefayela lakho lomsindo.
Incazelo -le nketho ifingqa ifayela lakho lomsindo.
Vula / vala amazwana -Yenza ngokwezifiso ukuthi isigaba sakho sokuphawula sivulekile noma cha.
Uhlobo -hlela ifayela lakho lomsindo ukuze abanye abantu balithole.
Yenza mahhala -khetha ukuthi ifayela likhululekile kubo bonke abasebenzisi noma ungalisebenzisa kuphela.
Amakhodi womculo weRoblox ayindlela enhle yokuqinisekisa ukuthi uthola okuhlangenwe nakho kwekhwalithi. Ukugembula kudinga uthando olukhulu, futhi kuyadingeka ukuba nomculo ongemuva ofanele. Kulesi siqondisi, singena ngokuningiliziwe ngamakhodi womculo ahlukile. Ungabazama futhi ube nokuhlangenwe nakho okuhle kokulalela umculo. Sibala amakhodi womculo weRoblox wezinye izingoma ezidume kakhulu. Umtapo wezincwadi weRoblox mkhulu kakhulu kuwe ukuthi uzame izinketho ezahlukahlukene. Hlola amathuba futhi uthole ulwazi lwakho lomculo oluhamba phambili emdlalweni.
imodi ephephile ye-tumblr icishiwe
mp3 Khipha ku-internet
amawindi 10 ekhaya nomfundi
yini ibhokisi le-android
indlela yokwenza umdlalo wesabekayo ku-roblox